कहाँबाट कसरी परे पक्राउ सुन काण्डका नाइके गोरे ? छानविन समितिको नयाँ खुलासा — Sanchar Kendra
कहाँबाट कसरी परे पक्राउ सुन काण्डका नाइके गोरे ? छानविन समितिको नयाँ खुलासा
काठमाडौं । ३८ क्वीन्टल सुन तस्करीका मुख्यअभियुक्त चुडामणि उप्रेती गोरे काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको छानविन समितिले जनाएको छ । गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा बसेको छानविन समितिले पत्रकार सम्मेलन गरी गोरे पक्राउ परेको जानकारी गराएको हो ।
छानविन समितिका संयोजक इश्वरराज पौडेलका अनुसार गोरे काठमाडौं आएको सूचनाका आधारमा पछ्याउने क्रममा पक्राउ परेका हुन् । विहान करिव ५ः ३४ बजेतिर काठमाडौं गौरिघाट क्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको हो । यसअघि उनलाई नेपाल-भारत सिमाक्षेत्रबाट पक्राउ गरिएको बताईएको थियो ।
मोरङ उर्लाबारी–४ का गोरे फरार अभियुक्त रहेका कारण मंगलबारै चाँडो भन्दा चाँडो मोरङ जिल्ला अदालतमा पुराइने पौडेलले बताए । तीन दिनदेखि कार्यालय बाहिर रहेर अनुसन्धान र सोधपुछ गरी पक्राउ गरिएको उनले बताए ।
घटनामा नयाँ सूचना र तथ्यसमेत फेला परेको बताएका पौडेलले यो प्रकरण ‘जेरी’ जस्तो जेलिएको बताए । उनका अनुसार ६५ जना अभियुक्तमा ३२ जना फरार छन् । अन्यमाथि थुनछेक बहस जारी छ ।
तस्करी गरी ल्याएको साढे ३३ किलो सुन हराएपछि हत्या गरिएका सनम शाक्यको शव लुकाउन नसकेपछि यो प्रकरण बाहिर आएको थियो । छानविन समितिको सक्रियतामा सन् २०१५ देखि विमानस्थलमा भएको ३८ क्विन्टल सुन तस्करीमा गोरेलगायतको संलग्नता पुष्टि भई अभियोगपत्र जिल्ला अदालत मोरङमा दर्ता छ ।
मुद्दाका विषयमा थुनछेक बहस जारी रहेका बेला मुख्य अभियुक्त नै पक्राउ गरेपछि तस्करीको नालीबेली पत्ता लाग्ने छानविन समितिको ठहर छ । गोरे पक्राउ गरिए पनि सुन तस्करीमा साथ दिने प्रहरी अधिकारी श्याम खत्रीलगायत अन्य फरार छन् ।
गोरे पक्राउ गरिए पनि मुख्य लगानीकर्ता एमके भनिने मोहनकुमार अग्रवालसहित अन्य फरार छन् । यस्तै लगानीकर्ता भनिएका गोरेकी पत्नी नवर्दा खरेल निरू र प्रेमिका रक्षा भण्डारी पनि फरार रहेका छन् ।
छानबिन टोलीले सबै अभियुक्तको खोजी भइरहेको जनाएको छ । जेठ मसान्तसम्म समय रहेका कारण यस अवधिमा धेरैलाई पक्राउ गरी मोरङ अदालतमा जिम्मा लगाइने समितिका अधिकारीले जनाएका छन् ।
को हुन् गोल्ड डन भनिने गोरे ?
मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मिएका गोरेका बाबु नेपाल प्रहरीका सहायक निरीक्षक थिए। सुन तस्करीमा लाग्नुभन्दा पहिला उनी दुबई प्रहरीमा जागिरे थिए। त्यही क्रममा दुबईका सुन माफियासँग उनको सम्बन्ध गाँसियो।
केही समयपछि गोरे नेपाल फर्किए। उच्च तहका नेतासँग हिमचिम बढाउन थाले। उनले प्रभावमा पार्नकै लागि मान्छे हेरेर महंगा उपहार दिए।
उनी खुलमखुला काठमाडौंमा हिँडिरहेका थिए प्रहरीले भने सो मुद्दामा गोरेलाई फरार भनेको थियो। स्रोतका अनुसार त्यतिबेला गोरेकै डिजाइनमा पक्राउ परेका भरियासँग कनेक्सन भएका मानिसलाई पनि मुछियो। ‘गोरेले जसको नाम दिए उनैलाई मुख्य अभियुक्त बनाइयो जसको भरियासँगै अन्य कारणले टेलिफोन कनेक्सन थियो, सुनसँग थिएन,’ स्रोतले भन्यो।
सुनसरीमा शव फेला पारे पनि महाशाखाको टोलीले मोरङमा लगेर शवको बरामदी मुचुल्का बनाएको स्रोतले बतायो। प्रहरीकै सूचनाका आधारमा गोरे भागेर भारत पुगेका थिए।